မေးခွန်းတွေကို မထည့်တော့ပါ။ မေးကြတာ မနည်းပါ။ ကျား-မ ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ လိင်လမ်းကြွက်နို့ဖြစ်ကြတာ မနည်းလှပါ။ အတွဲတခုက တယောက်မှာ ရောဂါရနေ၊ ပြနေရင် ကျန်တယောက်မှာလဲ ဘာမှလက္ခဏာမပြပေမဲ့ပိုးရှိနေပြီ။ တယောက်မှာ လိင်လမ်းကြွက်နို့ရှိနေရင် သူ့အဖေါ်ကိုလဲ ဆေးစစ်ရမယ်။ ဒါပေမဲ့ တယောက်မှာ အဲလိုတွေ့တိုင်း ဖေါက်ပြန်သူဆိုပြီး စွပ်စွဲလို့လည်းမရသေးပါ။
အမျိုးသမီးမှာဖြစ်နေတာဆိုရင် Pap smears သားအိမ်ဝကင်ဆာ ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးတာကို အနည်းဆုံး ၁ နှစ် လုပ်သင့်တယ်။ တကယ်လို့ ကြွက်နို့က သားအိမ်ဝမှာ ဖြစ်နေသူဆိုရင် ၃-၆ လတခါလုပ်ရမယ်။ ကွန်ဒွန်က HIV အတွက်သာမက လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့နဲ့ သားအိမ်အဝကင်ဆာအတွက်ပါ ကာကွယ်ရာကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြွက်နို့ပေါက်တဲ့နေရာကို ကွန်ဒွန်က ဖုံးမထားနိုင်ရင် ကြွက်နို့မှန်သမျှကို ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ပါ။ လိင်ဆက်တဲ့အဖေါ်ဆိုတာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရှိသင့်တယ်။ ကိုယ့်အဖေါ်၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်းကို သစ္စာရှိပါလေ။
ကြွက်နို့ရှိနေပေမဲ့ ကလေးမရတာမဖြစ်စေပါ။ ကိုယ်ဝန်ကိုလဲ မထိခိုက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတုံးဖြစ်တဲ့ လိင်လမ်း ကြွက်နို့အတွက် Imiquimod, Sinecatechins, Podophyllin နဲ့ Podofilox တွေကို မသုံးပါနဲ့။ ခွဲစိတ်တာ လုပ်ချင် လုပ်နိုင်တယ်။ ဗဂျိုင်းနားကြွက်နို့ကို Liquid nitrogen နဲ့ Cryotherapy လုပ်ရတယ်။ Cryoprobe မသုံးသင့်ပါ။ နောက်တနည်း TCA or BCA 80%–90% ပါးပါးလေး လိမ်းနိုင်တယ်။ ခြောက်သွေ့ပါစေ။ ဆေးများသွားရင် Sodium bicarbonate, Liquid soap နဲ့ဆေးပါ။ တပါတ်တခါ။
Urethral Meatus Warts ဆီးသွားပေါက်ကြွက်နို့ကို Cryotherapy with liquid nitrogen နည်း၊ ဒါမှမဟုတ် Podophyllin 10%–25% in compound tincture of Benzoin သုံးပါ။ ဆေးမလိမ်ခင် နေရာကို ခြောက်သွေ့နေပါစေ။ တပါတ်ခါ။
1. Podophyllin ဆေးကနေ ကြွက်နို့တစ်ရှူးတွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်မယ်။ အနာပေါ်မှာသာလိမ်းရမယ်။ ဆေးလိမ်းပြီးနောက် ၁-၄ နာရီကြာရင် ဆေးကြောပြစ်နိုင်တယ်။ တပါတ်မှ တခါနဲ့ ၄-၆ ပါတ်ကြာနိုင်တယ်။ လိုသေးရင် ဆက်သုံးပါ။ ဆေးလိမ်းတဲ့နေရာမှာ အနေရခက်မယ်။ နာမယ်။ အနာသစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေရင် မသုံးရပါ။
3. Bichloroacetic acid (BCA) နဲ့ Trichloroacetic acid (TCA) အက်စစ် ၂ မျိုးဆေးကနေ ကြွက်နို့ တစ်ရှူးတွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်မယ်။ ဆရာဝန်-ဆရာမကနေထည့်နိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ တပါတ် ၁ ခါသာ ထည့်ရတယ်။ ၄-၆ ခါ ကြာနိုင်တယ်။ ဆေးထည့်ရာနေရာမှာ ပူလောင်တာ နာတာရှိမယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလဲ သုံးနိုင်တယ်။
4. Imiquimod (Aldara) ခရင်မ်ဖြစ်တယ်။ ခုခံအားကို သက်ရောက်စေတယ်။ ညအချိန် အနာပေါ်လိမ်းရတယ်။ ၆-၁ဝ နာရီကြာရင် ဆေးပြစ်ပါ။ တပါတ်မှာ ၃ ရက်၊ ၁၆ ပါတ်အထိ လိမ်းနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိချိန်မသုံးရပါ။
5. Interferon အင်တာဖရွန်ဆေးကိုလဲသုံးတယ်။ ခုခံအားဆေး အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ ထိုးဆေးနဲ့ လိမ်းဆေးရှိတယ်။ ကြွက်နို့နေရာမှာ ထိုးတာက ပိုထိရောက်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက တုပ်ကွေးလိုခံစားရမယ်။ တခြားဆေးနည်းတွေနဲ့ မရမှသာသုံးပါ။ ဆေးနည်းနဲ့ ခွဲစိတ်နည်းတို့နဲ့ တွဲသုံးတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မသုံးရပါ။
6. Sinecatechins (Veregen) သစ်ပင်ကထွက်တဲ့ဆေး ကိုယ်တိုင် သုံးနိုင်တယ်။ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၁၆ ပါတ် ကြာနိုင်တယ်။ ဗဂျိုင်းနား၊ စအိုနေရာမှာလဲ သုံးနိုင်တယ်။ HIV ရှိသေူ၊ ရေယုံရှိနေသူတွေလဲ သုံးနိုင်တယ်။ အတူမနေခင် ဆေးပြစ်ရမယ်။ ကွန်ဒွမ်ကို အားနည်းစေနိုင်တယ်။ ဆေးထိရာမှာ နီရဲပြီး ယားမယ်။ ပူလောင်မယ်။
လိင်လမ်းမှာ ကြွက်နို့ရှိနေသူနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှုရှောင်ရင် ကူးစက်တာမဖြစ်စေပါ။ ရှိနေမှန်းမသိရင်ခက်တယ်။ ကွန်ဒွမ်က ကြွက်နို့ကို မဖုံးနိုင်ရင်လဲ ကာကွယ်မှုမပေးပါ။ တယောက်ကိုတယောက် ရိုးသားပါ။ Vulva HPV မိန်းကိုယ်မှာရှိတာကို စမ်းသပ်နည်းမရှိပါ။ Cervix HPV သားအိမ်ဝမှာရှိတာကိုတော့ စမ်းလို့ရတယ်။
သားအိမ်ဝကင်ဆာကာကွယ်ဆေးခေါ် HPV vaccine ကာကွယ်ဆေး Gardasil နဲ့ Cervarix ၂ မျိုးရှိတယ်။ Cervarix က သားအိမ်ဝကင်ဆာ 70% ဖြစ်စေတဲ့ types 16 and 18 ကိုကာကွယ်မယ်။ Gardasil ကာကွယ်ဆေးက လိင်လမ်းကြွက်နို့ 90% ဖြစ်စေတဲ့ types6and 11 ကိုကာကွယ်မယ်။ ယောက်ျားတွေအတွက် Gardasil ဟာ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ကို ကာကွယ်တယ်။ မိန်းကလေး ၉ နှစ်သမီးကနေ ၂၆ နှစ် သမီးအထိ ထိုးပေးသင့်တယ်။ ကြွက်နို့ ပေါက်နေသူ ထိုးဘို့မလိုပါ။ Gardasil ဆေးကို ၆ လ အတွင်းမှာ ၃ ခါ ထိုးရတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဆိုးဝါးတာမရှိပါ။
ကွန်မင့်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဆေးနည်းတွေလာရေးရင် ဖျက်ပါမယ်။ ဆောရီး။